Maamulka Jubaland Oo Aqbalay Qodobo ay Beesha Caalamka la Tageen Maanta Kismaayo. -
Sida ay sheegayaan Wararka laga helayo Magaalada Kismaayo Guddiga Doorashada Maamulka Jubbaland ayaa aqbalay labadii qodob ee ay wateen Wakiilada Beesha Caalamka ee maanta tegay magaalada Kismaayo.
Kulan dhexmaray Wakiilada Beesha Caalamka ee uu hoggaaminayey Wakiilka Q/Midoobay ee Soomaaliya iyo Guddiga Doorashada ayey Guddigu ku ogolaadeen in dib loo furo Diiwaangalinta Musharaaxiinta u taagan Doorashada Madaxweynaha Jubbaland iyo in dib lo dhigo xilliga Doorashada Jubbaland si Musharaxiinta mucaaradka waqti loo siiyo.
Qodobka ku saabsan wax ka bedelka shuruudaha Musharixiinta ayaa weli taagan, iyadoo dadaalka beesha caalamka uu qeyb ahaan hirgalay, laakiin lama oga inay aqbali doonaan musharixiinta isbedel doonka iyo taageerayaashooda.
Dadaaladii ugu danbeeyay ee Beesha Caalamka ayaa weli ka socda magaalada Kismaayo si looga baaqsado khilaaf iyo maamullo kala duwan oo Jubbaland yeelato.
Beledweyne Oo Laga Ogolaaday Isticmaalka Lacagta Shillin Soomaaliga.(Sawiro)